Amụma nzuzo - BullyingCanada
/ Amụma nzuzo
Iwu a na-emetụta ozi nkeonwe a na-anakọta na BullyingCanada's inye onyinye na ndị nwere ike inye onyinye.
N'ime amụma nzuzo a, okwu ndị a "BullyingCanada", "anyị" na "anyị" na-ezo aka n'ụlọ ọrụ nke BullyingCanada, Inc.
Anyị kpebisiri ike ichekwa ozi nkeonwe nke ndị nyere onyinye na ndị nwere ike inye onyinye. Amụma nzuzo a na-enye ozi gbasara otu anyị si anakọta, jiri, kpughee na chekwa ozi nkeonwe. Amụma nzuzo a na-akọwakwara otu onye nyere onyinye nwere ike isi kpọtụrụ anyị ajụjụ, yana otu onye nwere ike ịrịọ ka o gbanwee ma ọ bụ hichapụ ozi nkeonwe ọ bụla anyị nwere gbasara ha.
Nkwa anyi kwere gi
BullyingCanada agba mbọ n'ichedo nzuzo nke ozi nkeonwe nke ndị nyere onyinye ya, ndị ọrụ afọ ofufo, ndị otu ya na onye ọ bụla ọzọ metụtara nzukọ anyị. Anyị ji ntụkwasị obi nke ndị anyị na ha na-akpakọrịta na nke ọha kpọrọ ihe, ma ghọta na idobe ntụkwasị obi a chọrọ ka anyị doo anya na aza ajụjụ n'otú anyị si emeso ozi a na-ekerịta anyị.
N'oge ọrụ anyị dị iche iche na mmemme anyị, anyị na-achịkọtakarị ma na-eji ozi nkeonwe eme ihe. Onye ọ bụla anyị na-anakọta ozi dị otú ahụ kwesịrị ịtụ anya na a ga-echekwa ya nke ọma yana na ojiji ọ bụla nke ozi a ga-akwado nkwenye. Emebere omume nzuzo anyị iji nweta nke a.
BullyingCanada agbasiri mbọ ike ichekwa nzuzo nke ndị otu ya. Nke kachasị mkpa: A ga-echekwa ikike gị onwe gị na nzuzo na nzuzo.
Ịzụ ahịa nke ndepụta nzipu ozi n'etiti ndị ọrụ ebere nwere aha ọma
Iji nyere aka ịchọta ndị na-akwado ọhụrụ na iji rụọ ọrụ mmemme ịnakọta ego anyị na-eri nke ọma, mgbe ụfọdụ anyị na ndị ọrụ ebere ndị ọzọ nwere aha ọma na ndị nwere mmasị na-ere obere akụkụ nke ndepụta ndị na-enye onyinye ozi ozugbo. Anyị na-eme naanị mgbe ndị nyere onyinye nwere ohere ịjụ isonye na mgbanwe ndepụta a. Ndị nyere onyinye nwere ike ịpụ na nhazi a n'oge ọ bụla.
Site n'ịkwenye ikwe ka anyị gbanwee ozi kọntaktị nke ndị nyere onyinye wetara n'afọ ofufo, ha na-enyere anyị aka inweta aha nkwado ọhụrụ na nkwado ọhụrụ maka ọrụ dị mkpa, anaghị akwụ ụgwọ. A na-azụta ndepụta nzipu ozi na-amaghị aha site na ndị na-ere ahịa ndetu ndị otu nke atọ ma na-eji zipu mkpesa ozi ozugbo. Achọrọ ndị na-ere ahịa ndepụta a iji hụ na ndị nwe ndepụta enwetala nkwenye kwesịrị ekwesị iji aha ndị dị na ndepụta ahụ.
Ndị ọrụ ebere ndị ọzọ ga-amụta naanị aha na adreesị nke ndị nyere anyị onyinye ma ọ bụrụ BullyingCanada ndị nyere onyinye kwenyere inye onyinye maka ndị ọrụ ebere ndị anyị na ha gbanwere ndepụta nzipu ozi. N'otu aka ahụ, BullyingCanada adịghị eme ka ọ mara aha ndị dị na ndepụta anyị na-agbanwe ruo mgbe onye nyere onyinye maka ọrụ ebere ọzọ kpebiri inye onyinye BullyingCanada.
Ịnweta ozi gbasara ndị nyere onyinye n'otu n'otu
Anyị ga-enwe obi ụtọ ịgwa ndị na-enye onyinye maka ịdị adị, ojiji ọ bụla, na mkpughe nke ozi njirimara onwe onye, ​​​​ma nye ohere ịnweta ozi nkeonwe ahụ, dabere na ewepu iwu nyere, n'ime ụbọchị 30 (iri atọ) nke nnata nke arịrịọ ederede enyere. ka:
Ụlọ ọrụ nzuzo
Na-akọwa ozi nkeonwe
Ozi nkeonwe bụ ozi ọ bụla enwere ike iji mata ọdịiche, mata ma ọ bụ kpọtụrụ otu onye. Ozi a nwere ike ịgụnye echiche ma ọ bụ nkwenye nke mmadụ, yana eziokwu gbasara, ma ọ bụ ihe metụtara onye ahụ, ma ọ bụrụ na enyere ha BullyingCanada site na nyocha ma ọ bụ mkparịta ụka. Ewepụghị: ozi kọntaktị azụmahịa na ụfọdụ ozi ọhaneze dị, dị ka aha, adreesị, na nọmba ekwentị dị ka e bipụtara na akwụkwọ ndekọ aha ekwentị, anaghị ewere ozi nkeonwe.
Ebe onye ọ bụla na-eji ozi kọntaktị ụlọ ya dị ka ozi kọntaktị azụmahịa, anyị na-atụle na ozi kọntaktị enyere bụ ozi kọntaktị azụmahịa, na ọ bụghị n'okpuru nchebe dị ka ozi nkeonwe.
Otu anyị si anakọta ozi nkeonwe
BullyingCanada na-anakọta ozi nkeonwe gbasara mmadụ naanị mgbe ewepụtara ya n'afọ ofufo. Dịka, anyị ga-achọ nkwenye maka ojiji ma ọ bụ mkpughe ozi nkeonwe n'oge nchịkọta. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike iji ozi nkeonwe anakọtara na mbụ maka ebumnuche ọhụrụ (ya bụ ebumnuche nke ekwughị n'oge anakọtara ozi ahụ). N'ọnọdụ a, anyị ga-agwa onye ahụ site na email ma ọ bụ mail ma nye ohere ịpụ na ụdị ọhụrụ a.
BullyingCanada na-anakọta ozi nkeonwe mgbe enyere onyinye ma ọ bụ nkwa, mgbe BullyingCanada a na-arịọ ihe, ma ọ bụ na-eji ụfọdụ ọrụ weebụ anyị.
Anyị agaghị, dị ka ọnọdụ nke mmekọrịta BullyingCanada, chọrọ nkwenye na nnakọta, ojiji, ma ọ bụ mkpughe ozi gafere nke achọrọ iji mezuo ebumnuche akọwapụtara nke ọma yana ziri ezi nke a na-enye ozi.
Ozi nkeonwe gbakọtara site na BullyingCanada a na-edobe na ntụkwasị obi siri ike. Enyere ndị ọrụ anyị ikike ịnweta ozi nkeonwe dabere naanị na mkpa ha nwere iji mesoo ozi ahụ maka ebumnuche (s) nke ejiri nweta ya. A na-echekwa nchekwa iji hụ na egosighi ma ọ bụ kesaa ozi ahụ n'ọtụtụ ebe karịa ka achọrọ iji mezuo ebumnuche ejiri chịkọta ya. Anyị na-emekwa ihe iji hụ na edobere ozi a n'ezi ihe yana igbochi ya ịla n'iyi ma ọ bụ bibie ya.
A na-eji ozi nkeonwe anyị na-anakọta iji mee azụmahịa nke onye nyere onyinye rịọrọ ma ọ bụ nyere ikike. Nke a nwere ike ịgụnye iji ozi nkeonwe iji hazie onyinye, zipu ozi ma ọ bụ ihe achọrọ, debanye aha maka otu n'ime mmemme anyị, mee ka ndị mmadụ mara maka ya. BullyingCanada ihe omume na akụkọ, rịọ maka nkwado, ma mee ihe niile dị mkpa iji zụlite na ịnọgide na-enwe mmekọrịta anyị na ndị na-akwado ya.
Maka onyinye nke otu puku dollar ($1,000) ma ọ bụ karịa, BullyingCanada na-ebipụta aha ndị nyere onyinye na webụsaịtị ya, site na ikike nke ndị nyere onyinye. A na-ajụ ndị niile na-enye onyinye nwere onyinye nke otu puku dollar ($1,000) ma ọ bụ karịa ndị na-achọghị ka e bipụta aha ha ka ha gosi mmasị ha n'ụdị onyinye ha ma ọ bụ kpọtụrụ anyị site na ekwentị na (877) 352-4497, ma ọ bụ email na [email protected] ma ọ bụ site na mail na: 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B 9M1.
BullyingCanada nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ na-etinye aka iji nyere anyị aka n'inye ọrụ iji mezuo otu ma ọ bụ karịa n'ime ebumnuche akọwara n'elu. Amachibidoro ndị na-enye ọrụ ndị a iji ozi nkeonwe maka ebumnuche ọ bụla na-abụghị inye enyemaka a ma achọrọ ya ichekwa ozi nkeonwe ọ na-enweta n'aka anyị ma ọ bụ nwee ike ịnweta yana ịgbaso ụkpụrụ nzuzo izugbe akọwara na amụma nzuzo a.
Anyị na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu oge niile ohere ịghara ịkekọrịta ozi ha maka ebumnuche karịrị nke ejiri chịkọta ya nke ọma. Ọ bụrụ na oge ọ bụla, mmadụ ga-achọ ka emelite ozi ha ma ọ bụ wepụ ya n'otu n'ime listi nzipu ozi anyị, a na-agwa ha ka ha zitere anyị email. [email protected] ma ọ bụ kpọọ anyị na (877) 352-4497 na anyị ga-eme mgbanwe (s) na ozi nkeonwe n'ime 30 (iri atọ) ụbọchị.
Ọ bụrụ na mmadụ ahapụbeghị ịnata ozi nkwado sitere na ụlọ ọrụ mba anyị, anyị nwekwara ike iji ozi kọntaktị nye ozi gbasara ya. BullyingCanada mmepe ma ọ bụ mmemme, mmemme inye ego na-abịa, ma ọ bụ ohere nkwado.
Weebụsaịtị na azụmahịa eletrọnịkị
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị na BullyingCanada.ca anyị nwere ike ịnakọta ozi na-abụghị nke onwe. Anyị nwere ike ịnakọta ma jiri adreesị IP iji nyochaa usoro, na-ahụ maka saịtị ahụ, soro mmegharị ndị nyere onyinye, na ikpokọta ozi igwe mmadụ sara mbara maka iji mkpokọta. Anyị anaghị ejikọta adreesị IP na ozi nwere ike ịmata onwe ya.
Anyị na-eji protocol okwuntughe na sọftụwia ezoro ezo iji kpuchido ozi nkeonwe yana ozi ndị ọzọ anyị na-enweta mgbe arịọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ metụtara azụmahịa azụmahịa na/ma ọ bụ akwụ ụgwọ maka ịntanetị. A na-emelite ngwanro anyị oge niile iji bulie nchebe nke ozi dị otú ahụ.
Webụsaịtị anyị nwere njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ. Biko mara nke ahụ BullyingCanada Ọ bụghị maka omume nzuzo nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Anyị na-agba ndị na-enye onyinye ume ka ha mara mgbe ha hapụrụ webụsaịtị anyị yana ịgụ amụma nzuzo nke weebụsaịtị ọ bụla na-anakọta ozi nwere ike ịmata onwe ya.
Kuki bụ obere faịlụ ederede nke webụsaịtị nwere ike iji mata ndị ọrụ ugboro ugboro wee mee ka ọ dị mfe ịnweta na iji weebụsaịtị na-aga n'ihu. BullyingCanada eme ọ bụghị jiri ozi bufere site na kuki maka ebumnuche nkwado ma ọ bụ ahịa ọ bụla, ma ọ bụ kekọrịta ozi ahụ n'etiti ndị ọzọ ọ bụla. Ndị ọrụ kwesịrị ịma nke ahụ BullyingCanada enweghị ike ijikwa ojiji kuki ndị mgbasa ozi ma ọ bụ ndị ọzọ.
Maka ndị na-achọghị ozi anakọtara site na iji kuki, ọtụtụ ihe nchọgharị na-ekwe ka ndị ọrụ jụ ma ọ bụ nabata kuki. Biko mara na kuki nwere ike ịdị mkpa iji nye ụfọdụ atụmatụ dị na saịtị a.
Otu anyị si echekwa ozi nkeonwe
BullyingCanada na-eme usoro ezi uche dị na ya maka ịzụ ahịa iji kpuchido ozi nkeonwe megide ohere na-enwetaghị ikike yana idobe izi ezi na ojiji nke ozi ahụ nke ọma site na usoro anụ ahụ, teknụzụ na nhazi kwesịrị ekwesị. Azụmahịa na ntinye aka n'ịntanetị na webụsaịtị anyị na-esite na sistemu nchekwa, nzuzo yana echekwara nke na-echekwa ozi nkeonwe nke onye ahụ.
Ndị ọrụ anyị niile, ndị ọrụ afọ ofufo, na ndị na-enye ọrụ ka achọrọ ịgbaso usoro nke Amụma Nzuzo a ma chọọ ka ha dobe ozi nzuzo ha nwere mgbe ha na-arụ ọrụ ha. Edobere sistemu anyị niile site na firewall kacha mma yana achọrọ ndị ọrụ niile ka ha jiri paswọọdụ.
Ndokwa na mkpofu ozi nkeonwe
BullyingCanada na-ejigide ozi nkeonwe ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa iji mezuo ebumnobi(s) nke anakọtara ya na irube isi n'iwu ndị dị.
Na-emelite amụma nzuzo
Anyị na-enyocha omume nzuzo anyị oge niile maka mmemme dị iche iche ma na-emelite amụma anyị. Biko lelee weebụsaịtị anyị www.bullyingcanada.ca kwa oge maka ozi gbasara omume anyị kachasị ọhụrụ.
Otu esi apụ, rịọ ohere, ma ọ bụ melite ozi nkeonwe
BullyingCanada na-eme mbọ ezi uche dị na ya nke azụmahịa iji dobe faịlụ zuru oke, dị ọhụrụ na nke ziri ezi. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnweta, melite ma ọ bụ mezie ozi kọntaktị nkeonwe, rịọ ka ewepu na listi nzipu ozi anyị, ma ọ bụ kparịta ihe gbasara nzuzo anyị, biko kpọtụrụ onye ọrụ nzuzo anyị site na mail na 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B. 9M1 ma ọ bụ kpọọ na (877) 352-4497 ma ọ bụ zipu ozi-e [email protected]
Enwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara nzuzo na ikike gị gbasara ozi nkeonwe na webụsaịtị Kọmishọna Nzuzo nke Canada na www.priv.gc.ca/en/
Ozi na mmelite arịrịọ
Nzukọ anyị na-agba mbọ ichekwa nzuzo nke ozi nkeonwe nke ndị nyere ya onyinye, ndị ọrụ afọ ofufo, ndị ọrụ, ndị otu, ndị ahịa na ndị ọzọ niile metụtara ya. Anyị ji ntụkwasị obi nke ndị anyị na ha na-akpakọrịta na nke ọha kpọrọ ihe, ma ghọta na idobe ntụkwasị obi a chọrọ ka anyị doo anya na aza ajụjụ na otu anyị si emeso ozi nke ị họọrọ ịkọrọ anyị.
Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịlele ozi ha nke anyị nwere na ndekọ iji nyochaa, melite ma mezie ya, yana ka ewepụ ozi ọ bụla ochie.
Enwere ike imelite onye na-enye onyinye n'ozuzu na adreesị onye ahịa na ozi kọntaktị site na iji ozi emelitere na-eweghachi kaadị inye onyinye mgbe niile ma ọ bụ site na telifon. BullyingCanada akwụghị ụgwọ na (877) 352-4497 ma na-arịọ maka mgbanwe izugbe na faịlụ inye onyinye.
A ga-eme ka anyị degara anyị akwụkwọ n'akwụkwọ ozi ndị nyere onyinye na ndị ahịa, yana arịrịọ maka nnomi faịlụ nkeonwe.
Biko mara na mgbe achọrọ ụfọdụ faịlụ nkeonwe, enwere ike ịnwe ozi nzuzo metụtara ndị ọzọ ma ọ bụ ozi nzuzo nke ndị a. BullyingCanada jikọtara na faịlụ ahụ. N'ikwekọ BullyingCanada Amụma nzuzo, enweghị ike idetu ma ọ bụ wepụta faịlụ ndị a; agbanyeghị, ozi eziokwu ọ bụla gbasara onye na-arịọ faịlụ nke ya ka a ga-ewepụta.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, arịrịọ na mmelite niile ga-emecha n'ime ụbọchị 30 nke nnata nke arịrịọ ahụ.
Nchegbu na mkpesa
BullyingCanada agba mbọ na-emeso ndị na-enye onyinye, ndị ọrụ afọ ofufo, ndị ọrụ, ndị otu, ndị ahịa, na ndị ọzọ niile metụtara nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù. N'agbanyeghị mbọ kacha mma, a ga-enwe oge mgbe njehie na nghọtahie nwere ike ime. N'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla, mkpebi nke nsogbu ahụ ruo afọ ojuju nke akụkụ niile bụ isi nchegbu BullyingCanada. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na ederede:
Biko hụ na itinye ihe ndị a na ozi ma ọ bụ leta gị:
Adreesị na akara ekwentị ebe ịchọrọ ka enweta ya;
Ọdịdị nke mkpesa; na
Nkọwa dị mkpa maka okwu ahụ na onye gị na ya kparịtalarị okwu ahụ.
A ga-eme mgbalị iji zaghachi nchegbu na mkpesa n'oge.
Enwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara nzuzo na ikike gị gbasara ozi gbasara gị na webụsaịtị Kọmishọna Nzuzo nke Canada na www.priv.gc.ca/en/